“Haddii aynu Awoodeenna oo dhan ku jihayno Caafimaadka waan samato-bixin karnaa bulshadeenna” | Somaliland.Org
Wasiirku waxa uu sidaasi ka sheegay shalay mar uu soo xidhayay shir howleed ku saabsanaa istaraatajiyadda caafimaadka qaran oo lagu qabtay Huteel maansoor ee Magaaladda Hargeysa, waxaanu halkaasi ka caddeeyay in sidii loo hagaajin lahaa helista adeegyada caafimaad ay ka tahay xubinta ugu weyn istaraatajiyadda Wasaaradiisa. Shirweynahan istaraatajiyadda caafimaadka qaran oo laba cisho socday, waxa ka soo qayb- galay hawlwadeenada wasaaradda Caafimaadka iyo in ka badan 30 isugu jiray hay’adaha caalamiga ah iyo kuwa waddaniga ah ee aan dawliga ahayn iyo sida oo kale hay’adaha QM ee shaqo wadaagga la leh Waasaradda Cafimaadka.
Inkasta oo ay dalka ka jiraan 94 goobo caafimadka dadweynaha ahi, haddana sida uu xusay Wasiirku muwaadiniintu waxa ay kala kulmaan carqalado sidii ay u gaadhi lahaayeen iyada oo ay sababtuna tahay fogaanshaha u dhexeeya goobahaasi.
Wasiirka Caafimaadka Dr Xuseen Xoog, waxa uu sheegay in goobaha caafimaadka oo kala ah 87 xanaano (MCHs) iyo toddoba cusbitaal oo ah dalka oo dhan ay ugu yaraan midkiiba kan kale u jiro Masaafo dhan 70 km.
“Bal halkaasi ka qiyaas dhibaatada ay la kulmi karto hooyada daciifka ah iyo ilmaheeda xanuunsanayaa ee u baahan daaweyn degdeg ah,” ayuu yidhi Wasiirku.
Iyada oo uu yahay fogaanshuhu arrinta ugu adag ee haysata wasaarada ayuu tilmaamay Dr Xoog in ay tahay xaqiiqada dhibaatada uga sii dartay in 50% xanaanooyinka (MCHs) ay yihiin kuwo si aad ah u liita qalab ahaan iyo shaqaale ahaanba, taasina ay tahay arrinta Somaliland ka dhigtay kan shanaad dalalka dunida ee ugu dhimashada sarreeya carruurta.
Haddaba si wax looga beddelo arrintani oo looga midho dhaliyo istaraatajiyadda dawladda, waxa uu wasiirku ku booriyay dhammaan ka qeybqaatayaasha in ay hadafyadooda horumarinta caafimaad in ay isugu keenaan qorshaha istaraatajiyadeed ee caafimaadka qaran si loo gaadho in uu muwaadin kastaa uu si fudud u helo adeegyada daaweyneed.
“ Haddii aynu xoojinno waxa aynu haysano oo dhan oo ku jihayno horumarinta caafimaadka waxa aynu awoodi doonaa in aynu hagaajino heerka samata-bixinta ee dalka”, ayuu yidhi Wasiirka caafimaadku.
Isaga oo dhiirigelinaya sidii ay isku xidhnaansho dhaw u yeelan lahaayeen dawladda iyo qaadhaan bixiyayaasha, waxa uu sheegay in isku xidhnaanshaha qumani uu suurogelinayo in raad macno leh ay ku yeelato sidii ay si fudud ugu heli lahaayeen adeegyada caafimaadka muwaadiniinta deggan dalka daafihiisa oo gaadhaya 137,600 km oo laba jibbaar ah.
Ujeedooyinka shir hawleedkan labada cisho ahaa ee ay Wasaaradda Caafimaadku kula wadaagaysay qorshaheeda qaran ee istaraatajiyadda caafimaad bah wadaagteeda waxa uu tusay qorshahan 2013 – 2015 waxyaabihii lagu gaadhey oo dhan iyo mataaneynta howlaha labada dhinac ee qeybaha caafimaad ee gudaha ka socda iyo kuwa caalamiga ahba.
Previous PostSadexda Xisbi Qaran ee 10-ka sanadood ee soo socda oo Lagu DhawaaqayNext PostWasiirka Maaliyadda Somaliland oo G/Wakiiladda u faah-faahiyay Miisaaniyadda 2013-ka	Blog